Play Pirates Treasure Slot Game on Your Mobile Phone, အိုင်ပက်, BlackberryMobile Casino Plex
Pirates ရတနာ Play!
နာမတျောအဆိုလိုအဖြစ်, ပင်လယ်ဓားပြရတနာဝှက်ထားလျက်ရှိသောဘဏ္ဍာကိုရှာဖွေပင်လယ်ဓားပြများ၏ဆောင်ပုဒ်အပေါ်တွင်အခြေခံထားပါသည်. တစ်ဦးက5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း,9payline ဂိမ်း, ပင်လယ်ဓားပြရတနာမျိုးစုံကိုအလောင်းအစားရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်း, 10p မှလိုင်းနှုန်း£ 1 အထိ. ဒီဂိမ်းဟာတောက်ပတဲ့မြားပါဝငျ, ပြတ်သားဂရပ်ဖစ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပင်လယ်ဓားပြအဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပင်လယ်ဓားပြသင်္ကေတများ, ရွှေဒင်္ဂါး, တစ်ကမာ, ကဒ်များကိုကစားမယ့်ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောကိုနှင့်မြင့်မားတန်ဖိုးကို. ဒါဟာရိုင်းသောသင်္ကေတများပါဝင်သည်, ကြဲဖြန့်သင်္ကေတများနှင့်ဆုကြေးငွေဂိမ်း, သငျသညျကွီးစှာသောငွေသားဆုအနိုင်ရမှအခွင့်အလမ်းများကိုများများပေးခြင်း.
Pirates Treasure ၏ဂိမ်းကစားခြင်း
သငျသညျအနညျးငယျကိုလငျး-နှလုံးခံစားဘို့ပျော်စရာအဘို့ကစားရန်ရှေးခယျြနိုငျသို့မဟုတ်အချို့ကိုသင်ဘဏ္ဍာကိုအနိုင်ရမှာသင်၏လက်ကိုကြိုးစားရန်အမှန်တကယ်ငွေကစားနိုင်ပါတယ်. သငျသညျကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံအဘို့ကစားရန်ရွေးချယ်လိုလျှင်, ဂိမ်းကိုစတင်ရန်, သင်သည်သင်၏အလောင်းအစား၏အရွယ်အစားနှင့်သင်တို့အပေါ်အလောင်းအစားချင်လိုင်းအရေအတွက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ spinning အရက်ကြောင့်မှားယွင်းစတင်ရပါမည်. လှည့်ဖျားနှုန်းနိမ့်ဆုံးအလောင်းအစား 10p ဖြစ်ပါသည်, အများဆုံးလောင်းကြေးစဉ်, သင်တို့ရှိသမျှအပေါ်အလောင်းအစားလျှင်9လိုင်း, £ 9.
1 mFortune အွန်လိုင်း - အခမဲ့ဝင်မည် & မှတ်ပုံတင်မည် - ကစားတဲ့, slots, Blackjack! $£€ 100 ကိုပွဲစဉ်အပိုဆု + နယူးကစားသမားများအတွက်£5အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအပိုဆု ဆန်းစစ်ခြင်း အလည်အပတ် »
ရွှေဒင်္ဂါးဂိမ်းထဲမှာရိုင်းသောသင်္ကေတသည်နှင့်ကအားလုံးကိုအခြားသင်္ကေတများအဘို့ substitutes, တစ်အနိုင်ရပေါင်းစပ်ဖြည့်စွက်ဖို့ကြဲဖြန့်သင်္ကေတများ မှလွဲ..
သင်သည်သင်၏အနိုင်ရရှိများပြားခြင်းနှင့်အိမ်ပြန်ကြီးမားသောဆုကြေးငွေယူဖို့အခွင့်အလမ်းခွင့်ပြုရွှေဘဏ္ဍာကိုအပြည့်အဝဘဏ္ဍာကိုကိုင်ဆောင်သောနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာ feature ကိုဘုတ်အဖွဲ့လည်းရှိပါသည်.
ဒီဂိမ်းကိုသင်ယူဖို့နဲ့သငျသညျသေးငယ်တဲ့ကစားနည်းကနေကြီးမားတဲ့ဆုကြေးငွေအနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းစဉ်ကစားရန်ရိုးရှင်းသော. ဂိမ်းထဲမှာအလောင်းအစားအရွယ်အစားတစ်ပြားမှ slot နှစ်ခုကစားသမားများအတွက်သင့်လျော်သည်. ဒါဟာသင့်မိုဘိုင်းဟန်းဆက်ပေါ်တွင်ကစားနိုင်သည့်ဆွဲဆောင်မှုလောင်းကစားရုံ slot နှစ်ခုဂိမ်း option ဖြစ်တယ်, mFortune မိုဘိုင်းကာစီနိုမှတဆင့်သွားလာရင်း.
အဆိုပါဖုန်းကာစီနို | မိုဘိုင်းဂိမ်းများ | ယခု…
Phone ကိုကာစီနိုမိုဘိုင်း | အိတ်ကပ် Fruity…
ရိုင်းသောဂျက်တိုက်ရိုက်ကာစီနို | Get $€1600…
မိုဘိုင်းဖုန်းကာစီနိုအားဖြင့်ပေးဆောင် | PocketWin…